အင်ကြင်းသန့်: ဂျင်းနဲ့ စတိုင် ဘာကိုရွေးမလဲ
Hi Little Sis, Hooray!!
Paid visit to your site.
တော်သေးတာပေါ့... မောလိုက်တာ ဖတ်ရင်းနဲ့... :P
အမလည်း ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဂျင်းကြိုက်တယ်
Jean ပဲ ကြိုက်တယ် ဝတ်မှာပဲ...:D
ပထမ ဂျင်းတွေကို ခရေဇီပေါ့။ နောက်တော့ စတိုင်ဘောင်းဘီတွေအရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။ အခုကျတော့ ဂျင်းမှ ဂျင်းဖြစ်နေပြီ။
အမ လည်း ၊ စတိုင်တွေ မလိုင်တွေ မကြိုက်ဘူး ..
ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တာ ကိုပဲ ကြိုက်တယ်